Clip ofufe Manufacturers & Suppliers - China Clip ofufe Factory
AC220V 8inch okpokoro ofufe
Anyị uru 1.Product :( Ọgwụ na ịkpụzi, echichi, nchekwa, nlezianya àgwà akara, ọhụrụ ngwaahịa imewe na mepụtara, Ọkachamara mmepụta akara, na ofu oru ọrụ) na-niile Integrated. 2.Service: Ezigbo onye ahia ahia nke mba ọzọ, ụlọ ọrụ na-ebufe ibu ọrụ na nke kachasị mma 3. Ihe nchekwa gburugburu ebe obibi 4. Ọdịdị nke oge a na nkecha 5. Ezi ọrụ 6. Oge nnyefe dị mkpirikpi 7 nwere ike mejuo ọtụtụ ndị ahịa ahịa ụdị mmepụta ngwaahịa Ọganihu .. .
Ọrụ anyị OEM / ODM ikike 1. N'agbanyeghị nnukwu ma ọ bụ obere usoro, a ga-enye Ogo kacha mma na Ọrụ kacha mma. 2. Nsogbu ọ bụla ị hụrụ, biko kpọtụrụ anyị Mgbe anyị na ndị ọrụ na-arụ ọrụ 3. Site na ndidi niile, a ga-enye ụzọ edozi. 4.Onwere akwụkwọ ikike na mgbe a na-ere ahịa maka ajụjụ ndị ọzọ, biko kpọtụrụ anyị >>